गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रधानाध्यापकहरुलाई मेयर डा. पौडेलको निर्देशन
सिमरा, १८ पौष . जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन उपमहानगरभित्र रहेका विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उपमहानगरभित्रका ६३ वटा सामुदायिक बिद्यालयका प्रध्यानाध्यापकसंग आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख डा. पौडेलले सामुदायिक बिद्यालयले अब निजि बिद्यालयको शैक्षिक स्तरसंग भिन्नता नहुने गरी सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक स्तर कमजोर रहेको भन्दै आउने गरेको टिकाटिप्पणीप्रति गम्भिर रहेको भन्दै नगर प्रमुख डा. पौडेलले अबका दिनमा त्यस्ता टिकाटिप्पणी आउन नदिनका लागि आफ्नो जिम्मेवारी गम्भिरताका साथ बहन गर्न प्रध्यानाध्यापकलाई निर्देशन दिए । प्रमुख डा. पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानिय तहमा आएपछि शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउन र शैक्षिक क्षेत्रको समस्या समाधानका निम्ति उपमहानगर गम्भिर भएर अघि बढिरहेको बताए ।
सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार नगरेसम्म हामीले आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनौ’ नगर प्रमुख डा. पौडेलले भने “ अव पनि सुधार नल्याए कहिले ल्याउने ? त्यसैले प्रधानाध्यापकले आफ्नो बिद्यालयको सुधारका लागि गम्भिर हुनुप¥यो ।’
उपमहानगरले सबै बिद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गर्नका निम्ति पहल सुरु गरिसकेकाले नियमित अनुगमन र निरिक्षण समेत गर्ने डा. पौडेलले बताए । उपमहानगरको कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भईरहेकाले शैक्षिक क्षेत्रको ब्यवस्थापन र सुधारका निम्ति उपमहानगरले गम्भिरताका साथ पहल गर्ने डा. पौडेलको भनाई थियो ।
उपमहानगरमा प्राविधिक शिक्षालय, स्वरोजगारमुलक शिक्षालय र बालबिकास कक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउदै अघि बढ्नका निम्ति उपमहानगरले पहल गरिरहेको प्रमुख डा. पौडेलले बताए । उपमहानगरलाई समृद्ध बनाउने अभियान शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र बिकास बिना सम्भव नहुने भन्दै उपमहानगरको अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारका निम्ति उपमहानगरले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताईन् । उपप्रमुख चौधरीले शैक्षिक स्तर सुधारका अभियानमा बिद्यालयका शिक्षक र अभिभावकले समेत साथ दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामकृष्ण उप्रेतीले शिक्षा क्षेत्रको बहुआयामिक बिकासका निम्ति बिद्यालयका प्रध्यानाध्यापककै भूमिका अहम हुने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा प्रध्यानाध्यापकको तर्फबाट अनिल मैनालीले मन्तब्य राख्दै शैक्षिक क्षेत्रले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा उपमहानगरलाई जानकारी गराएका थिए । पथलैयास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिद्यालयका ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामदास धौजुको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन श्यामसुन्दर सापकोटाले गरेका थिए । कार्यक्रममा तिलक खड्का स्वागत मन्तब्य राखेका थिए ।